इयुहोफाको विश्व सम्मेलनले पर्यटन पर्वद्धनमा सहयोग पुग्छ : खेमराज लकाईं
खेमराज लकाईं, सिइओ गेट कलेज तथा बोर्ड मेम्बर इयुहोफा इन्टरनेसनल
२०७६ मङ्सिर ११ बुधबार ११:१६:००
विश्वभरिका होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुलको छाता संगठन इयुहोफा इन्टरनेसनलको विश्व सम्मेलन बुधबार (आज)देखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । ५८ वर्षअघि युरोपमा जन्मिएको इयुहोफाको पहिलोपटक एसियाली मुलुकमा सम्मेलन हुन लागेको हो । यो संस्थामा सातै महाद्वीपका टप होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल सदस्य छन् । नेपालबाट पहिलोपटक बोर्ड मेम्बर बनेका खेमराज लकाईसँग इयुहोफाको विश्व सम्मेलनबारे नवीन अर्यालले गरेको कुराकानी :
आजदेखि काठमाडौंमा ५८औँ इन्टरनेसनल इयुहोफा इन्टरनेसनल कंग्रेस सुरु हुँदै छ, यो कस्तो कार्यक्रम हो ?
११ मंसिरदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौंमा इयुहोफा इन्टरनेसनल कंग्रेस हुँदै छ । यो विश्वभरका होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुलको विश्व सम्मेलन हो । बुधबार साँझ याक एन्ड यतीमा सम्मेलनको उद्घाटन हुँदै छ । कार्यक्रम अवधिभर विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ । विश्वको पहिलो होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुलले १२६ वर्ष मनाए पनि नेपालमा होटेल व्यवस्थापनको स्नातक तह पढाइ सुरु भएको २० वर्ष पनि भएको छैन । जुन वेला होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल खुले, त्यो वेला युरोप फोकस्ड थियो । त्यहाँका होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल संगठित भए । र, ५८ वर्षअघि इयुहोफा भन्ने संस्था जन्मियो ।
बिस्तारै अरू मुलुकमा पनि होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल खुल्न थाले । अनि इयुहोफाको सञ्जाल पनि फैलिँदै गयो । युरोपमा जन्मिएको संस्था हुनाले सुरुमा ‘युरोपियन होटेल स्कुल एसोसियन’ नामकरण भयो । पछि यसको नाम परिवर्तन गरेनन्, तर सञ्जाल विश्वभरि फैलिँदै गयो । यो संस्थामा कलेजको प्रमुख मात्र सदस्य हुन्छ । एक्जुकेटिभ बोर्ड ११ जनाको हुन्छ । दुई वर्षअघि इटालीमा भएको सम्मेलनबाट म बोर्ड मेम्बरमा चुनिएँ जुन नेपालबाट पहिलोपटक हो ।
हामी अब्बल बन्न युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलियाका स्कुल कसरी चलिरहेका छन् तिनका मोडल हेर्नुप-यो । आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र हुँदैन । हामीले विश्वका बेस्ड प्राक्टिसबाट सिक्नुपर्छ भनेर इयुहोफा इन्टरनेसनल कंग्रेस नेपालमा गर्न पहल गरेका हौँ । यो विश्व सम्मेलन पहिलोपटक एसियाली मुलुकमा हुँदै छ ।
इयुहोफाका सदस्यमध्ये सम्मेलनमा कति देशबाट सहभागी आउँदै छन् ?
इयुहोफामा विश्वभरिका दुई सयभन्दा बढी होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल सदस्य छन् । अहिले २३ देशका ७५ जना विशिष्ट व्यक्ति आउनुभएको छ । यो विश्व सम्मेलनमा नेपालीसहित १०० जनाले सहभागिता जनाउनुहुनेछ । विश्वका ख्यातिप्राप्त स्पिकरले सम्मेलनमा बोल्नुहुनेछ । सम्मेलनमा विश्वका टप स्कुलका डिन, सिइओको सहभागिता रहनेछ । जो यसअघि कहिल्यै नेपाल आएका थिएनन्, उनीहरूको राडारमै नेपाल पर्दैनथ्यो । उनीहरूले नेपालबारे राम्रो बोल्नुभयो भने नेपालको पर्यटनलाई पनि फाइदा पुग्छ । हाई एन्ड टुरिजमलाई ठूलो माइलेज मिल्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा इयुहोफाको विश्व सम्मेलन गर्दा राम्रो माइलेज पाइनेछ ।
नेपालबाट कुन–कुन होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल सहभागी हुँदै छन् ?
इयुहोफा इन्टरनेसनलमा नेपालका १२ वटा होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुल सदस्य भए पनि सम्मेलनलाई होस्ट गर्ने ८ स्कुल मात्र हुन् । विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सक्रिय भएर लाग्ने गेट कलेज, गोल्डेन गेट, सिल्भर माउन्टेन, आइएसटी, पोखराको नेपाल टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज, नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट (नाथम), मिड भ्याली र गेटवे कलेज हुन् ।
विश्व सम्मेलनका कार्यक्रमबारे बताइदिनुस् ?
सम्मेलनमा मुख्यतः तीन सेसन हुनेछन् । तीन दिनसम्म ‘इन्भाएरोमेन्टल सस्टेनबिलिटी एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसन’, ‘माइन्डफुलनेस, वेलविङ एन्ड रोल अफ कल्चर’ र ‘रोल अफ एडभेन्चर, हेप्पिनेस एन्ड फुलफिलमेन्ट’ विषयमा छलफल हुनेछ । अहिले विश्वमै इन्भायरोमेन्टल सस्टेनिबिलिटी चर्चाको विषय बनेको छ । इन्भायरोमेन्ट राम्रो भएन भने टुरिजम नै रहँदैन । यो विषयलाई शिक्षामै कसरी समावेश गर्ने ? भनेर बृहत् छलफल हुँदै छ । बोर्ड मिटिङमा विश्वभरका होटेल म्यानेजमेन्ट स्कुलमा भइरहेका बेस्ट प्राक्टिसमा पनि छलफल हुन्छ ।
विश्वका टप होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजका प्रमुख आउँदा नेपाली कलेज सञ्चालकले धेरै कुरा सिक्न पाउँछन् भने विदेशीले सिकेर गएको कुराबाट नेपालको प्रचारप्रसार पनि गरिदिन्छन्
सम्मेलनबाट नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ?
नेपाललाई संसारले कसरी चिन्छ ? हिमालयको देश मात्रै भनेर चिन्छ त ? नेपाल एउटा स्प्रिचुअल कन्ट्री पनि हो । गौतम बुद्ध यहीँ जन्मिए । नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ धार्मिक सहिष्णुता छ । अपार प्राकृतिक सम्पदा छन् । जैविक विविधता छ । नेपालको टुरिजमका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । हाम्रो पर्यटनबारे विश्वका नीति निर्मातालाई थाहा हुन्छ । भ्रमण वर्ष २०२० मा राम्रो सन्देश फैलिन्छ । हाम्रो लागि यो सम्मेलनले विशेष महत्व राख्छ ।
सम्मेलनको एउटा सेसन चन्द्रागिरिमा हुँदै छ । यसले नेपालमा पनि केबलकार चढेर जाने ठाउँ रहेछ भन्ने सन्देश दिन्छ । एउटा सेसन याक एन्ड यती होटेलमा हुन्छ । एउटा सानो सेसन गुम्बामा गर्दै छौँ । विश्वका टप होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजका प्रमुख आउँदा नेपाली कलेज सञ्चालकले धेरै कुरा सिक्न पाउँछन् । कतिपय नेपाली कुरा विदेशीले सिकेर जान्छन् । नेपालको प्रचारप्रसार गरिदिन्छन् ।
सम्मेलनका वक्ताहरू को–को हुनुहुन्छ ?
यो विश्वस्तरीय सम्मेलन हो । वक्ताहरू चोकी निमा रिम्पोचे, फ्रेन्च एम्बास्डर, स्विस एम्बास्डर, भुटानका सांसद डा. पासाङ दोर्जी, होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)को अध्यक्ष सिर्जना राणा, इसिमोडका निर्देशक डेभिड मोल्डेन, क्यानडाबाट मास्टर सेफ माइकल स्टाडल्यान्डर, इन्डियाको नायक, नायिकालाई डाइट र फिटनेस सिकाउने गुरु रुजुता दिवेकार, डब्लुडब्लुएफका कन्ट्री डाइरेक्टर डा. घनश्याम गुरुङ, माउन्टेनियर शैली बस्नेत, एसडीसीको नेसनल प्रोग्राम अफिसर डा. उषा भण्डारी, फुड एन्ड कल्चर वेलविङ एक्स्पर्ट जुडी सिवास्टर, लेखक कार्मन बेरी र नेपाल रिभजर कन्जरभेसन ट्रस्टका अध्यक्ष मेघ आले हुनुहुन्छ । प्रोफेसर पिटर जोन्स र दीपेन्द्रपुरुष ढकालले मोडिएटरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।
सम्मेलन नेपालमा गर्न कसरी सम्भव भयो ?
म बोर्डमा सदस्य मनोनीत भएपछि पहल गरिरहेका थियौँ । उज्जल सत्याल र मैले लगातार सम्मेलनमा जाँदा बोर्ड मेम्बरका लागि दाबी ग¥यौँ । निर्वाचित पनि भइयो । बोर्डमा पुगेपछि सम्मेलनका लागि दाबी गर्न पाइयो । बरु नेपालमा गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने थियो । पछिल्लोपटक केन्याले गरेको देखेपछि हामीलाई आँट आयो । इयुहोफामा आबद्ध नेपाली सदस्य सबैले साथ दिनुभयो । र, नेपालमा गर्न सम्भव भयो ।
#खेमराज लकाईं # इयुहोफा # विश्व सम्मेलन
एनआरएनएको नवौँ विश्व सम्मेलन आजदेखि
एनआरएनएका नवौं विश्व सम्मेलनको लागि प्रतिनिधि काठमाडौं आउने क्रम सुरु